Dawladda Thai waxay kor u qaadday xashiishadda Danaha Ganacsi • Dawooyinka Inc.eu
Dawladdu waxay dhiirrigelinaysaa xashiishadda oo ah dalag kaash ah oo loogu talagalay beeralayda dalka iyo ilo kale oo dakhli, ayuu yidhi sarkaal sare Axaddii. "Qof kastaa wuxuu xaq u leeyahay inuu beero marijuana isagoo la kaashanaya isbitaalada gobolka adeeg caafimaad," ayay tiri ku xigeenka afhayeenka dowlada Traisulee Traisoranakul.
"Illaa iyo hadda, 2500 qoys iyo 251 isbitaallo goboleed ayaa soo saaray 15.000 dhir xashiishad ah," ayay tiri. "Waxaan rajaynaynaa in marijuana iyo hemp ay dalag aasaasi ah u noqon doonaan beeralayda." Hay'adaha kale ee dalban kara rukhsadaha si ay u koraan waxaa ka mid ah jaamacadaha, ganacsiyada bulshada, iyo xirfadlayaasha caafimaadka.
Xashiishadda ayaa laga saaray liiska mukhaadaraadka
Ku dhawaaqista ayaa timid kadib Thailand sanadkii hore ayaa laga saaray liiska waxyaabaha maanka dooriya qaarkood ee xashiishka iyo hemp. Weed sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa cuntada iyo cabitaanka makhaayadaha, illaa iyo inta ay ka imaaneyso soo saare la aqoonsan yahay. Waa Machadka Marijuana ee Caafimaadka bishan waxay bixisaa fadhiyo macluumaad ah oo loogu talagalay maalgashadayaasha iyo dadweynaha.
De Ururka Dawooyinka Dawada, ayaa sheegtay inay ka iibsan doonto dheriga shirkadaha bulshada ee la ansaxiyay illaa iyo 45.000 baht kiilogaraam dhirta soo baxda 12% cannabidiol (CBD).
Tijaabada xashiishka Dutch ee flop weyn
Horey wax badan ayaa looga qabtay tijaabada haramaha. Nederland - waddanka daroogada - keligiis ma socdo ...